प्रचण्डको प्रस्तावपछि ओली संकटमा : को दोषी रहेछ आखिर ? « Ok Janata Newsportal
प्रचण्डको प्रस्तावपछि ओली संकटमा : को दोषी रहेछ आखिर ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल पक्षका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संकट देखिएको छ । पार्टीमा काम गर्न नपाएको भन्दै अलग्गिएका ओलीलाई प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोलिसकेपछि सकस भएको हो ।
आफू एकताकै पक्षधर भएको र अग्रगमन तर्फ गइसकेको मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न नसकिने भन्दै प्राइम टेलिभिजनमा मंगलबार राति ८ बजे प्रचण्ड बोलेका थिए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा समस्या सुल्झिन्छ भने म तयार छुँ ।’
यसरी हेर्दा, नेकपाको एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका प्रचण्डको प्रस्तावलाई केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मन नभएरै पनि दुई भागमा विभाजित कम्युनिष्टका पक्षधरहरुले प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि एकताको झिनो आश पलाएको बताएका छन् । एक नेताले भने, ‘कम्युनिष्टलाई चोइट्याउन को उद्दत रहेछ, अब थाहा हुन्छ । साच्चै एकतालाई चाहेको हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर नेकपा मिल्न जरुरी छ ।’
थपिएका केन्द्रीय सदस्य के हुन्छन् ?
प्रचण्डको प्रस्तावपछि नेकपा महाधिवेशन गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी अगाडि बढेमा हाल ओली पक्षले नियुक्त गरेको केन्द्रीय सदस्यले वैधानिकता पाउने–नपाउनेमा पनि बहस गर्न जरुरी छ । ओलीले आफूसँग केन्द्रीय सदस्य नभएपछि अहिले धमाधम नियुक्त गरेका छन् । करिब १५०० भन्दा बढीको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।
पार्टी एकता हुने संकेत देखियो भने ओलीले नियुक्त गरेका केन्द्रीय सदस्य वैधानिक होइनन् । पार्टी नै वैधानिक तवरले फुटिनसकेको अवस्थामा धमाधम नियुक्त गरेका केन्द्रीय सदस्यले मान्यता पाउँदैनन् । यद्यपि बहुमतका आधारमा दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्न सक्छ । तैपनि यता कुनै संगठनलाई चलाइएको छैन ।
ओली मान्लान त ?
आफूले नियुक्त गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई वैधानिकता नदिएमा प्रधानमन्त्री ओली एकतामा नआउने प्रष्ट छ । ओलीको पक्षमा पार्टीमा बहुमत नभएपछि उनी टुक्रिएका हुन् । पार्टी एकताका लागि यो विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।
सिंगो कम्युनिष्टको इतिहासमा फरक छबि बनाएका ओलीलाई यो नैतिक संकटलाई पार लगाउन सके हिरो बन्ने अवसर पनि छ ।